Counterpoint inoisa iyo Apple Watch zvakare seyakanakisa-kutengesa smartwatch | Ndinobva mac
Counterpoint zvakare inoisa iyo Apple Watch seyakanyanya kutengesa smartwatch
Apple mawatch anoramba ari iwo anotengesa zvakanyanya pasirese uye izvi zvinodzokororwa kasingaperi nemishumo yakaitwa nevanoongorora vakasiyana siyana. Mune ino kesi mumwezve mushumo pamusoro Counterpoint Research, umo kutengesa kwechigadzirwa cheApple kunofungidzirwa.
En chirevo ichi iyo data yakaunganidzwa inoratidzwa uye tinogona kuzviona 4 pa10 smartwatches akatengeswa pasirese panguva yekota yekupedzisira ye2020 ndeaya eApple.
Sekureva kweshumo, Apple ingadai yakatowedzera huwandu hwayo, ichisvika padyo nemamirioni gumi nematatu mawatch akatengeswa, kunyanya mumushumo iwe unogona kuona huwandu hwe12,9 mamirioni mayuniti akatengeswa. Mhando dzakachipa kwazvo dzeApple Watch dzakatangwa dzine zvakawanda zvekuita nenhamba idzi uyezve itsva Apple Watch Series 6.
Apple haipe yepamutemo Apple Watch nhamba yekutengesa uye zvine musoro aya mafemu akadai seCounterpoint anovimba nekutumirwa kuti aite aya manhamba. Zvinonakidza kuona kuti sei Iyo Apple Watch inoenderera ichiwedzera mwedzi nemwedzi yepamusoro uye zvirinani kutengesa nhamba kunyangwe isiri Apple pachayo inoratidza zvabuda zviri pamutemo.
Kune rimwe divi, iyo sarudzo yekushandisa iyo Apple smart wachi ku kiinura iPhones neFace ID, inoita kuti chishandiso ichi chiwedzere kunakidza kutenga uye nhamba idzi dzinogona kuramba dzichikura pamusoro pemwedzi. Kune runyerekupe pamusoro peiyo nyowani iri nani mhando yeiyi 2021 saka hatitende kuti wachi icharasikirwa nemhepo mukutengesa uye zvine chokwadi chekuti icharamba ichirova vese vaikwikwidza navo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Counterpoint zvakare inoisa iyo Apple Watch seyakanyanya kutengesa smartwatch
Kutanga iyo 12,9-inch iPad Pro, kozoti iyo 16-inch MacBook Pro ine OLED kuratidza
Chekutanga turera yeiyo "inoshuvira" akateedzana Anodaidzira Apple TV +